Otu esi eme ma ghọta Stirling engines - Ikkaro
Na-akpali akpali engines
N'akụkụ a, anyị ga-abanye n'ime edemede igwe, nkọwa, ụdị igwe na-akpali akpali na ihe atụ nke ihe owuwu na ngwa.
Anyị mepụtara ngalaba n'ime injin maka edemede igwe. Anyị na-etinye ozi na blog, dịka ndepụta nke njikọ na akụrụngwa nwere ozi ndị ọzọ gbasara ụdị a injin, ya mere echere m na ọ dị mma ịkọwa ihe mere m ji nwee mmasị na ha ...
El akpali akpali bụ ihe engine, nke bilitere dị ka ihe ọzọ iji igwe uzuoku. Naanị ọ chọrọ isi iyi ọkụ iji rụọ ọrụ na mkpụrụ a nwetara dị ezigbo mma. Na usoro iwu, ọ bụ naanị ya nwere ike inweta arụmọrụ Carnot yana na omume na obere ọsọ, ha na-ekwu na ọ dị nso. Ọrụ Carnot bụ nke kachasị elu na igwe ọkụ.
Ngwurugwu Anyanwụ nke Almería Ọ na-arụ nnukwu akụrụngwa iji gbanwee ntụgharị nke moto ahụ n'ime ike eletrik, na-etinye ike anyanwụ n'otu ebe iji nweta bọlbụ ọkụ nke moto ahụ.
Maka ndị gị na-eche maka uọhụrụ isi iyi nke locomotion na-agwa gị na ọ bụ ezie na ọ nwere a nnukwu arụmọrụ su ike a kapịrị ọnụ ọ bụ obere, n'adịghị ka ndị ọzọ esịtidem combustion engines na-eji ụgbọ ala.
Mana ihe kacha masị m bụ ịhụ obere ụdị dị iche iche na-arụ ọrụ naanị n’ọkụ na-ewepụta n’ahụ mmadụ. Ma ọ bụ iko kọfị.
Lee ụfọdụ vidio vidio ma hụ ma ọ bụrụ na anyị gbadata ịrụ ọrụ iji wuo otu n'ime ụmụntakịrị.
Mkpokọta nke na-akpali njikọ banyere igwe ihe na-akpali akpali.
Igwe nbanye na Wikipedia. Ntinye Wikipedia raara nye Rnọ ọdụ, n'ihi na m detụ ntakịrị umengwụ. O doro anya na enwere ndị ga - eme ka ọ kawanye mma.
Distal na Eurodish. Nnukwu-oru ngo iji tọghata anyanwụ ike n'ime usable ike site edemede igwe.
Ọrụ ikpeazụ. Dabere na igwe ihe na-akpali akpali. Enwere ike ịchọta ihe ọmụma na ihe ndị na-adọrọ mmasị.
Teknụzụ gaferela. Nnọọ mara mma nkọwa banyere edemede igwe
Igwe na-akwagharị. Nnukwu nchịkọta nke njikọ na Bekee.
Inyocha EngineLinks. Ọzọ dị mkpa chịkọtara njikọta na Bekee, nwute na ozi a niile adịghị ọtụtụ na Spanish.
Ọ bụrụ n ’ịmatakwu ihe ọmụma ndị ọzọ, egbula oge ịhapụ ikwu na anyị ga-agbakwunye njikọ ahụ.
Esi ewu a Stirling engine
Mgbe ịmalite blọọgụ banyere igwe na-akpali akpali, onye anyi, Jorge Rebolledo O ziteere anyị echiche gbawara maka ngwa igwe nke o mepụtara site na vidiyo dị na YouTube.
N'ihi na ọ buru oke ibu, anyị ga - ekewapụta igwe rụọ ihe atọ.
Nke a bụ nke mbụ.
Igwe na-akpali akpali site Jorge Rebolledo